WIKILEAKS oo kashifay sirta ka dambeysa Federalism-ka Somalia | Voice Of Somalia
WIKILEAKS oo kashifay sirta ka dambeysa Federalism-ka Somalia
Websitka Wekaleks ee caanka ku ah faafinta siraha dowladaha Caalamka, ayaa waxaa waraaqihii dhawaan uu kala soo baxay keydka Wasaaradda arimaha dibadda Xukuumadda Sucuudiga kamid ah warqad muujineysa sida Reer galbeedku u doonayaan kala qeybinta dalka Soomaaliya.
Warqadan oo oo kasoo baxay safaaradda dowladda Sucuudiga ee Jabuuti ayaa waxaa lagu sharaxayay xaalada dalka Soomaaliya markii uu Ra’iisul wasaaruhu ahaa Cabdi wali Maxamed Cali Gaas, waxaana warqadan ay muujineysaa in la qorsheeyey in Soomaaliya loo kala qeybiyo afar gobol, islamarkaana labo gobo lagu daro dowladda Kenya, labana la siiyo dowladda Ethoobiya.
Safiirka dowladda Sucuudiga u fadhiya Jabuuti ayaa si tifaftiran waxa uu u sheegay in Ciidamada Kenya ay gudaha u soo galeen 1000 km koonfurta Soomaaliya, ayna dowladda Talyaaniga aad ugu taageereyso dowladda Kenya faragelinta ay ku heyso Soomaaliya.
Sida ku qoran Warqadda waxay Soomaaliya noqotay Saaxo aad u barwaaqo badan, islamarkaana dowlado badan ay daneynayaaan ku lug lahaanshaheeda iyo boobkeeda.
Dhowr jeer oo hore ayaa arrintan loo sii shaaciyay, waxaana dariiqa loo marayaahi uu yahay kan federalisimka ee haatan socda.
Ma muuqato cid aanan ahayn Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo karti u leh iney diido qorshahan lagu kala qeybsanayo wadanka.